Dabka Duufaanta Wanaagsan ee Weli Ka Baxsan Turkiga, Giriigga, Talyaaniga & Spain
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Badbaadada Safarka & Xaaladaha Degdega ah » Dabka Duufaanta Wanaagsan ee Weli Ka Baxsan Turkiga, Giriigga, Talyaaniga & Spain
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Giriigga • Warshadaha Warshadaha • Italy War Deg Deg Ah • News • Ammaanka • Wararka Spain • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Turkiga
Fadlan u ducee Giriigga waxay ahayd farriin la helay. Goobaha fasaxa ee jasiiradaha Kos, Rhodes ee Giriiga, Sicily, iyo Koonfurta Spain waxay u halgamayaan sidii loo badbaadin lahaa waxa la badbaadin karo iyadoo dab-bakhtiyo ba'an ay ku darayaan faafitaanka COVID-19 iyo dhulgariirrada gobollada kale qaarkood. Isbedelka cimiladu waa dhab, tani hadda way ka caddahay Antalya ilaa Spain.
COVID iyo dhulgariirrada ayaa ku sii daraya gurmadka dabka oo sii kordhaya
Recently eTurboNews laga wariyay wildfires kacsan gobolka Antalya ee dalka Turkiga.
Dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay, dabku kama holcin Turkiga oo keliya, laakiin hadda sidoo kale Giriigga, Talyaaniga, iyo Spain. Tan waxaa dheer dhulgariirkii ka dhacay Turkiga iyo Giriigga iyo kororka caabuqyada COVID-19.
Maaha Kurdiyiinta, sida ay qabaan qaar ka mid ah hoggaamiyayaasha Turkiga, laakiin isbeddelka cimiladu waa dambiile. Tani waa digniin culus oo ay keentay dabeecad la xumeeyey.
Boqolaal ayaa laga daadgureeyay goobaha xeebaha iyo guryaha gobollada sidoo kale waxay isku dayayeen inay soo celiyaan dalxiiskii.
Tani waa maalintii lixaad iyada oo boqolaal qof laga daadgureeyay Giriigga, Talyaaniga, iyo Spain iyadoo boqolaal laga daadgureeyay goobaha xeebaha iyo guryaha.
Tirada dadka ku dhintay dabka Turkiga ayaa gaartay XNUMX kadib markii laba qof oo kale ay Axaddii ku dhinteen Manavgat. Dabka magaalada ayaa durba galaaftay nolosha shan qof iyo hal qof oo ku sugnaa goobta loo tamashlaha tago ee Marmaris.
Turkiga ayaa la kulmaya dabkii ugu darnaa ugu yaraan toban sano, iyadoo ku dhawaad ​​95,000 oo hektar la gubay illaa kuleyl aad u kulul oo daboolay badda Mediterranean.
Inta badan dabkii 112 ama ka badan ee ka qarxay Turkiga kaligiis shantii maalmood ee la soo dhaafay ayaa la xakameeyay, iyadoo dab -damiyayaashu ay xoogga saareen dadaalkooda Manavgat, Marmaris, iyo Milas.
Mas'uuliyiinta Turkiga ayaa baaraya sababta dabka loogu magac daray dagaalyahannada Kurdiyiinta ama gubidda carruurta, laakiin maadaama dabku uusan hadda ku fidin Turkiga oo keliya ee uu ku badan yahay waddamada Koonfurta Yurub, arrintu waxay u badan tahay inay la xiriirto isbeddelka cimilada.
Magaalada Pescara ee dalka Talyaaniga, 800 oo qof ayaa laga daadgureeyay guryahooda iyo goobaha loo dalxiis tago ee xeebta ka dib markii uu dab ka kacay dhul dabiici ah oo 53-acre ah. Waaxda dab damiska qaranka ee dalka ayaa sheegtay in loo yeeray in ka badan 800 oo xaalad deg deg ah. 250 xaaladaha degdegga ah ee dabka waxaa lagu tiriyey 250, 130 Puglia iyo Calabria, 90 Lazip, iyo 70 Campania.
Sicily, 200 qof ayaa laga daadgureeyay magaalada dekedda leh ee Catania.
Giriigga, dab ayaa dhammaadkii usbuuca ka kacay Patras, oo ku taal xeebta galbeed. Shan tuulo ayaa laga qaxay siddeed qofna isbitaal ayaa loo dhigay dhibaatooyin xagga neefsashada ah iyo gubasho.
Dab -damiska ayaa la dagaallamay habeenka oo dhan si ay u xakameeyaan dab ka kacay jasiiradda fasaxa ee Rhodes.
Rhodes, oo ah tan ugu weyn jasiiradaha Dodecanese ee Greece, waxaa lagu yaqaanaa meelaha lagu caweeyo ee xeebaha, burburkii qadiimiga ahaa, iyo hadhaagii ay qabsadeen Knights of St. John intii lagu jiray Saliibiyiinta. Magaalada Rhodes waxay leedahay Magaalada Qadiimiga ah oo ay kujirto Wadadii Dhexe ee Knights iyo Qasrigii u ekaa Qasriga Grand Masters. Qasrigii Cusmaaniyiinta ayaa qabsaday kadibna Talyaanigu haystay, qasrigu hadda waa madxaf taariikhi ah.
Diyaarado iyo helikobtarro ayaa biyo ku shubay dabka Maritsa iyo Psinthos ee gobollada waqooyi halka xoojin loo diray subaxnimadii Isniinta.
Dalxiise ayaa bartiisa Twitter -ka ku soo qoray: “Diyaaraduhu waxay istaageen qiyaastii 3 saacadood ka hor si ay biyaha uga soo saaraan badda. Markaa waxaan u malaynayaa in dabku baxay. Maanta waxay ku duuleen dhammaan 8 -dii daqiiqo ee huteelkeenna. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha dab -damiska iyo caawiyayaasha. ”
Dhammaan daqiiqadaha 5-10 waxay biyo ku shubtaan hoteelkeena hortiisa. #Rhodes #Rhodos # dab #gurecefire pic.twitter.com/TyhuaIE2jW
"Waxaan ku nool nahay cadaabta," ayuu yiri Duqa Bodrum: "Suurtagal ma aha in dabka laga dejiyo dhulka, waana goor dambe in la isticmaalo diyaaradaha dab -demiska ama helikobtarrada. Waxaan isku dayaynaa inaan ilaalino meelaha la deggan yahay. Laakiin waxba ma samayn karno si aan u badbaadino geedaha.
Dabka Xoolaha ee Yurub & Turkiga
@selingirit iyo @timursoykan tweeted: “Kani waa weerar dab -damis argagax leh oo kaymaha ah, dabab aad u badan ayaa isku mar billowday, Thanks to the great dadaal will control them control” mar kale iyo mar kale) Shaki kuma jiro in dhaawaca la soo kaban doono! ”
Goobaha la deggan yahay ee ka baxsan Athens, guryuhu way gubanayaan, xaaladda jasiiradda fasaxa Giriigga ee Kos & Rhodes waa mid quus ah; Tweeter kale ayaa yiri oo ku daray: "..waxaan ahay badhtamaha kulaylka 45 centigrade, covid, iyo dhulgariirrada."
Laga soo bilaabo Giriigga, qoraal ayaa leh: “Dhammaan Giriigga ayaa gubanaya .. woqooyiga Athens, Rhodes, dabku ma xakamayn. Fadlan u ducee Giriigga. ”
Akhriste ku sugan Athens ayaa ku daray: “Qeybta waqooyi ee Athens, dabku waxaa sabab u ah qarax ka dhacay fiilooyin xiisad sare leh. Waxa kale oo jira dab ka kacay koonfurta Peloponnesus, Rhodes, Kos, iyo meelo kale oo Giriig ah kulaylka daran awgeed. Sidee wax u socdaan Spain? ”
Dabka ka kacay Spain ayaa gubay wadar dhan 81,194 hektar sannadka 2019. Maamulka maxalliga ah ayaa soo sheegay 10,717 dab, kuwaas oo 3,544 ay ka weyn yihiin hal hektar. Tan waxaa ka mid ah 14 dab oo waaweyn oo mid walba saameeyay in ka badan 500 hektar.